Cadaymo Muujinaya Fadeexad Musuq-maasuq iyo eex Qabiil oo Dul-hogganaysa Wasiirka Macdanta S/land Jaamac Maxamuud Cigaal...Liiska Shaqaale Sahaminta Shidaal ee Gobolka Saaxil oo laga soo qoray Bariga Burco iyo Gadoodka Dadweynaha Saaxil...?.
Wednesday February 14, 2018 - 01:55:48 in Wararka by Super Admin
Berbera(Xogreebnews.com)-Wasiirka Wasaaradda Macdanta Somaliland Jaamac Cigaal, ayaa waxa dul-hogganaaya fadeexado musuqmaasuq iyo wax isdaba marin badheedh, isla markaana aan nooceeda weli hore loo arag.
Wasiirka macdanta oo muddo ka yar laba bilood xilka wasiirnimo hayey, ayaa shaqadii koowad ee u qabto ku can-qariyey eex iyo qabyaalad badheedh ah, oo u kula kacay mashruuca sahaminta shidaal ee Berbera. Waxanu wasiirku shaqaalaha mashruucan ka dhigay ashkhaas kasoo wada jeeda Beeshiisa ama deeganka bariga Burco.
Tallaabada Wasiirka ayaa gadood ku abuurtay dadweynaha ku dhaqan deegaanada Shidaalka laga baadhayo ee gubanka Gobolka Saaxil.halkan Hoose ka akhri shaqaalaha mashruuca oo wada Beesha Wasiirka ah.
4.Caabi Fuel Station
5.Adan Maxamed Jamac
Sidoo kale ...tanina waa hormo kaloo lamid ah.
1.Ray –Gas (wakiilka shirkadda Ras al Khaimah) waxa uu kasoo jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaale.
2.Wakiilka shirkada samahinta ee Chines ah, waxa uu kasoo jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaal.
3.Madaxa kallunka ee Shidaal Baadhista, waxa uu kasoo jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaal.
4.Madaxa isku xidhka bulshada iyo hayada waxa uu kasoo jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaal.
5.Mareeyaha petrolka gobolka saaxil waxa uu kasoo jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaal.
Sidoo kale waxa uu wasiirku mashruucan usoo qortay 24 shaqaale ka ah, oo kasoo jeeda jeeda Beesha wasiirka Jamac Maxamuud Cigaal.
La soco qaybaha dambe ee Warbixino daaha ka faydi doono qabyaaladda uu ugu Ku wanqalay ama u Ku shaasheeyey wasiirka Cusub ee Macdantu mashruuca sahaminta Shidaal ee gobalka Saaxil.